Rashford oo raaligelin u diray taageerayaasha Man United kaddib guuldarradii NUS DARSANKA aheyd ee Kooxda Tottenham Hotspur – Gool FM
(Manchester) 05 Okt 2020. Xiddiga kooxda Manchester United ee Marcus Rashford ayaa fariin raaligelin u diray taageerayaasha Man United kaddib guuldarradii NUS DARSANKA aheyd ee Kooxda Tottenham Hotspur.
Marcus Rashford ayaa ciyaarta kaddib wuxuu ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka wuxuu ku sheegay:
“Marka ugu horeysa waxaan ahay taageere United ah, waana kooxda aan ka tirsanahay, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan xirto maaliyadeeda”.
“Laakiin ma jiraan wax cudurdaar ah, ma aheyn wax fiican marka loo fiiriyo taageere kasta oo kooxda ah ee ku sugan adduunka oo dhan, aad ayaan uga xumahay”.
“Waxaad u qalantaa intaas in ka badan, waxaan jeclaan lahaa inaan ka fogaado baraha bulshada, laakiin waxaad mudantihiin inaad i dhageysataan inta lagu jiro xilliyada guusha iyo guuldarada, ma jiraan wax la qarin karo, waxaan dareemayaa cabsi laakiin waxaan idin balan qaadayaa inaan soo bandhigi doono heerka ugu fiican”.
Si kastaba ha ahaatee, Tottenham Hotspur. ayaa guul raaxo leh ka soo gaartay 10 xiddig kooxda Manchester United ah, kaddib markii ay kaga soo adkaadeen 1-6, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League.